सलमानले कालो हरिणलाई गोली हानेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले खोले राज - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»सलमानले कालो हरिणलाई गोली हानेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले खोले राज
सलमानले कालो हरिणलाई गोली हानेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले खोले राज
By पूजा बानियाँ on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०९:११ हलिवुड/बलिवुड
बीबीसी। सागरराम बिश्नोई उनीहरुमध्ये पहिलो व्यक्ति हुन् जसले मारिएका कालो हरिणलाई पोस्ट मार्टमाकालागि पठाएका थिए। यसअघि उनले संचारमाध्यमसँग कुरा गरेका थिएनन्। बीबीसी हिन्दीका स्रोतासमेत रहेका सागररामले एक विशेष अन्तवार्ताक्रममा सलमान खान, सैफअली खान, नीलम, सोनाली बेन्द्रे र तब्बूलाई पहिलो पटक घटनास्थलमा लैजाने मध्येका एक आफू बताएको बताए।
१९९८ मा वनरक्षक रहेका सागरराम बिश्नोई २८ मार्च, २०१८ मा राजस्थान वन सेवाको वन्य–जीव विभागबाट असिस्टेन्ट सब–इंस्पेक्टर पदबाट अवकाश भएका छन्। यसअघि उनले कहिल्यै पनि मिडियासँग कुरा गरेका थिएनन्।
के सलमान खानले नै शिकार गरेका थिए?
कालो हरिण शिकार गरेको अभियोगमा कुल पाँच वटा सरकारी प्रमाण छन्। ती मध्ये सागरराम बिश्नोइ विटनेस नम्बर दुई हुन्। उनका अनुसार तीन प्रत्यक्षदर्शीले सलमान खान र उनका सहयोगी फिल्मी कलाकारले कालो हरिण शिकार गरेको देखेका थिए। २ अक्टुबर १९८८ मा उनी वन्य जीव चौकीका सहायक वन रक्षक भंवर लाल बिश्नोई समक्ष हरिणको शिकार भएको अभियोग दर्ता गराउन गएका थिए।
त्यतिबेला एक वन रक्षक अर्थात फरेस्ट गार्ड रहेका सागरराम बिश्नोई मौकामा घटनास्थल पुगे र उनले मरेका दुई वटा कालो हरिणलाई लगेर अफिसमा पेश गरे। अफिस पुगेपछि मरेका कालो हरिणको पोस्टमार्टम गर्ने तय भयो र उनीहरु डा. नेपालिया भएको ठाउँमा पुगे।
सारगराम बिश्नोईले भने, ‘ मलाइ अलिहे पनि सम्झना छ, त्यो दिन फेरेन्सिक जाँच गर्ने डा. नेपालियाको विदा थियो। हाम्रो विभागको पोस्टमार्टम गर्ने व्यक्तिको सहयोगमा उनले हरिणको पोस्टमार्टम गरे र एक दुई दिनभित्र रिपोर्ट आउने बताए। तर, रिपोर्ट धेरै दिनसम्म आएन। जब रिपोर्ट आयो रिपोर्टमा हरिणको मृत्युको कारण प्राकृतिक र अत्याधिक खाना खाउका कारण बताएको उल्लेख थियो, जुन अस्वाभाविक थियो।’
केही दिन अगाडि जुन ट्रायल अदालतले सलमान खानलाई कालो हरिण शिकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ, उसले आफ्नो आदेशमा यो कुरा उल्लेख पनि गरिएको छ। आदेशमा डा. नेपालियाको जाँचपछि दोस्रो पटक फरेन्सिक जाँच गराइयो। राजस्थान वन विभागका डा. नेपाललिाको विरुद्ध गलत रिपोर्ट दिएको आरोप लगाएर एफआइआर दर्ता गराइएको थियो। सागरराम बिश्नोइ भन्छन्, ‘स्पष्ट रुपमा देखिएको छ हरिणको मृत्यु गोली लागेर भएको हो।’
उनले अक्टुबर १९९८ मा दोस्रो फरेन्सिक रिपोर्टमा कालो हरिणको मृत्यु गोली लागेर भएको उल्लेख भएको त्यसपछि मात्रै ती फिल्मी कलाकारलाई पक्राउ गरेको बताए। अदालतको आदेशमा के कुरालाई उल्लेख गरिएको छ भने सलमान खानले हरिणको शिकार बन्दुकले गरेका हुन्।’
सागरराम बिश्नोई अगाडि भन्छन्, ‘हामीले यी पाँच जनालाई घटनास्थलमा लगेका थियौं। र, त्यो राति सलमान, सैफ, नीलम, तब्बू र सोनाली बेन्द्रेलाई गुडामा हाम्रो वन विभागको चौकीमा राखिएको थियो। म त्यही थिएँ। तर, भित्र जिल्लाका ठूलो अफिसर मात्र थिए। गुडा वन विभागमा करिव ३२ गाउँ छन्। जसमा कांकाणी पनि शामेल छ, जहाँ हरिणलाई मारिएको थियो।’ मैले सागरराम बिश्नोईसँग सोधे, ‘ सलमान र अन्यका विरुद्ध २० वर्षदेखि यो विषय बिश्नोइ समाज लडिरहेको छ। तपाइँ विटनेस नम्बर–२ भएको सरकारी प्रमाण हुनुहुन्छ। तपाइँ आफैं बिश्नोइ पनि हुनुहुन्छ। यसबाट केही फरक पर्दैन तपाइँ बिश्नोई हो?’
सागररामले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, ‘यो प्रश्नको जवाफ त मैले अदालतमा पनि दिइसकेको छु। सुनुवाईका क्रममा सलमानका वलीक हस्तीमल सारस्वतले पनि सरकारी प्रमाण धेरै बिश्नोई नै छन्। मैले जवाफ दिएँ, बिश्नोईको इलामाका वन संरक्षण र सरकारी काममा बिश्नोई नभए को हुन्छ त?’
सागरराम बिश्नोईले बिदा हुनु पहिल आफ्नो घरमा मझेरीमा उभिएर भने, ‘त्यतिबेला मेरा ड्यूटी वन्य–जीव फ्लाइङ स्कवाडमा हुने गथ्र्यो। कयौं ठाउँमा गएर मैले मानिसहरुसँग कुरा पनि गरेको छु। ती मध्ये सबैले काला हरिणको शिकार बन्दुक लागेर भएको बताएका छन्।’
राजस्थानमा बलिउड सुपरस्टार सलमान खान विरुद्ध जनावरको हत्या गरेको चार अभियोग दर्ता भएका थिए। ती मध्ये तीनवटामा उनलाई सफाई दिइसकिएको छ। ट्रायल कोर्टबाट पाँच वर्षको जेल सजाय पाएपछि सलमान दुई दिन जेलमा बस्नुपर्यो। त्यसपछि उनलाई सशंस अदालतले सलमानलाई समानतमा रिहा गर्न आदेश लिएको छ। यो विषयमा अर्को सुनुवाई मे महिनाको पहिलो हप्ताबट सुरु हुँदैछ।
सैफअली आन, तब्बू, नीलम र सोनाली बेन्द्रे दुईवटा कालो हरिण शिकार गरेको अभियोगमा अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।